1 Ihe E Mere 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ihe E Mere 2:1-55
2 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Izrel:+ Ruben,+ Simiọn,+ Livaị+ na Juda,+ Ịsaka+ na Zebulọn,+ 2 Dan,+ Josef+ na Benjamin,+ Naftalaị,+ Gad+ na Asha.+ 3 Ụmụ Juda bụ Ea+ na Onan+ na Shila.+ Ọ bụ nwa Shua, nwaanyị Kenan, mụụrụ ya ụmụ atọ a. Ea bụ́ ọkpara Juda bụ onye ọjọọ n’anya Jehova, o wee gbuo ya.+ 4 Ọ bụ Tema+ nwunye nwa ya mụụrụ ya Pirez+ na Zira. Ụmụ niile Juda mụrụ dị mmadụ ise. 5 Ụmụ Pirez bụ Hezrọn na Hemọl.+ 6 Ụmụ Zira+ bụ Zimraị na Itan na Himan na Kalkọl nakwa Dera.+ Ha niile dị mmadụ ise. 7 Ụmụ Kamaị+ bụ Eka onye wetaara Izrel nsogbu,+ bụ́ onye mere omume ekwesịghị ntụkwasị obi n’ihe banyere ihe a ga-ebibi ebibi.+ 8 Ụmụ Itan+ bụ Azaraya. 9 Ụmụ a mụụrụ Hezrọn+ bụ Jeramiel+ na Ram+ nakwa Kelubaị. 10 Ma Ram mụrụ Aminadab.+ Aminadab amụọ Nashọn+ bụ́ onyeisi ụmụ Juda. 11 Nashọn amụọ Salma.+ Salma amụọ Boaz.+ 12 Boaz amụọ Obed.+ Obed amụọ Jesi.+ 13 Jesi amụọ Elayab+ bụ́ ọkpara ya, na Abinadab+ nwa ya nke abụọ, na Shimia+ nwa ya nke atọ, 14 Netanel nwa ya nke anọ, Radaị nwa ya nke ise, 15 Ozem nwa ya nke isii, Devid+ nwa ya nke asaa. 16 Ụmụnne ha ndị nwaanyị bụ Zeruya na Abigel;+ ụmụ Zeruya bụ Abishaị+ na Joab+ na Asahel,+ mmadụ atọ. 17 Ma Abigel mụrụ Amesa;+ nna Amesa bụ Jita+ onye Ishmel. 18 Ma Keleb nwa Hezrọn+ mụrụ ụmụ ndị ikom. Ọ bụ Azuba nwunye ya nakwa Jeriọt mụụrụ ya ụmụ ndị ahụ; ụmụ ndị a ka ọ mụụrụ ya: Jisha na Shobab na Adọn. 19 E mesịa, Azuba nwụrụ. Keleb wee lụọ Efrat,+ bụ́ onye mụụrụ ya Họọ.+ 20 Họọ amụọ Yuraị.+ Yuraị amụọ Bezalel.+ 21 E mesịa, Hezrọn na ada Mekia+ bụ́ nna Gilied+ nwere mmekọahụ. Ọ lụrụ ya mgbe ya onwe ya dị iri afọ isii, ma ọ mụụrụ ya Sigọb. 22 Sigọb amụọ Jeya,+ bụ́ onye nwere obodo iri abụọ na atọ+ n’ala Gilied. 23 E mesịa, Geshọ+ na Siria+ napụrụ ha Havọt-jeya,+ tinyere Kinat+ na obodo nta ya niile, obodo iri isii. Ndị a niile bụ ụmụ Mekia bụ́ nna Gilied. 24 Mgbe Hezrọn+ nwụsịrị na Keleb-efrata, Abaịja nwunye Hezrọn mụụrụ ya Ash-họ bụ́ nna Tekoa.+ 25 Ụmụ Jeramiel+ bụ́ ọkpara Hezrọn bụ Ram+ bụ́ ọkpara ya, na Buna na Oren na Ozem na Ahaịja. 26 Jeramiel wee lụọ nwaanyị ọzọ, onye aha ya bụ Atara. Ọ bụ nne Onam. 27 Ụmụ Ram,+ bụ́ ọkpara Jeramiel, bụ Meaz na Jemin na Ika. 28 Ụmụ Onam+ bụ Shamaị na Jeda. Ụmụ Shamaị bụ Nedab na Abaịshọ. 29 Aha nwunye Abaịshọ bụ Abihel, bụ́ onye mụụrụ ya Aban na Molid ka oge na-aga. 30 Ụmụ Nedab+ bụ Siled na Apayim. Ma Siled nwụrụ n’amụtaghị nwa. 31 Ụmụ Apayim bụ Ịshaị. Ụmụ Ịshaị bụ Shishan;+ ụmụ Shishan abụrụ Alaị. 32 Ụmụ Jeda nwanne Shamaị bụ Jita na Jọnatan. Ma Jita nwụrụ n’amụtaghị nwa. 33 Ụmụ Jọnatan bụ Pilet na Zeza. Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Jeramiel. 34 Shishan+ amụtaghị ụmụ nwoke, kama ọ bụ ụmụ nwaanyị ka ọ mụrụ. Ma Shishan nwere otu onye Ijipt na-ejere ya ozi+ nke aha ya bụ Jaha. 35 Shishan wee kpọrọ nwa ya nwaanyị kpọnye Jaha bụ́ onye na-ejere ya ozi ka ọ bụrụ nwunye ya. Ka oge na-aga, ọ mụụrụ ya Ataị. 36 Ataị wee mụọ Netan. Netan amụọ Zebad.+ 37 Zebad amụọ Eflal. Eflal amụọ Obed. 38 Obed amụọ Jihu. Jihu amụọ Azaraya. 39 Azaraya amụọ Hilez. Hilez amụọ Eliesa. 40 Eliesa amụọ Sismaị, Sismaị amụọ Shalọm. 41 Shalọm amụọ Jekamaya. Jekamaya amụọ Elishama. 42 Ụmụ Keleb,+ nwanne Jeramiel, bụ Misha ọkpara ya, bụ́ nna Zif, nakwa ụmụ Marisha bụ́ nna Hibrọn. 43 Ụmụ Hibrọn bụ Kora na Tapua na Rikem nakwa Shima. 44 Shima amụọ Reham bụ́ nna Jọkiam. Rikem amụọ Shamaị. 45 Ụmụ Shamaị bụ Meyọn; Meyọn bụ nna Bet-zọọ.+ 46 Ma Ifa bụ́ iko Keleb mụrụ Heran na Moza na Gezez. Heran amụo Gezez. 47 Ụmụ Jadaị bụ Rigem na Jotam na Gishan na Pelet na Ifa nakwa Sheef. 48 Iko Keleb bụ́ Meaka mụrụ Shiba na Tiahana. 49 Ka oge na-aga, ọ mụrụ Sheef bụ́ nna Madmana,+ Shiva bụ́ nna Makbina na Gibia.+ Ada Keleb+ bụ Aksa.+ 50 Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Keleb. Ndị a bụ ụmụ Họọ+ bụ́ ọkpara Efrata:+ Shobal+ bụ́ nna Kiriat-jierim,+ 51 Salma bụ́ nna Betlehem,+ Heref bụ́ nna Bet-geda. 52 Shobal+ bụ́ nna Kiriat-jierim wee mụọ ụmụ: Haroe nakwa ọkara Menuhọt. 53 Ezinụlọ Kiriat-jierim bụ ndị Itraịt+ na ndị Putaịt na ndị Shumataịt na ndị Mishraịt. Ọ bụ n’etiti ndị a ka ndị Zora+ na ndị Eshtaọl+ si pụta. 54 Ụmụ Salma bụ Betlehem+ na ndị Netofa,+ Atrọt-bet-joab na ọkara ndị Manahat nakwa ndị Zora. 55 Ezinụlọ ndị odeakwụkwọ bụ́ ndị bi na Jebez+ bụ ndị Taịrataịt, ndị Shimiataịt, ndị Sukataịt. Ọ bụ ndị a bụ ndị Kenaịt,+ bụ́ ndị Hamat, nna ụlọ Rikab,+ mụrụ.
1 Ihe E Mere 2